Recent Post Archives - Movies Trends
पशुपतिशमशेर राणाको लागि रेखाले ‘डान्स’ गरेपछि स्थानीयवासीहरु भए आगो
- November 18, 2017 December 1, 2017
काठमाडौं । चर्चित नायिका एवम् राप्रपा(प्रजातान्त्रिक) की महामन्त्री रेखा थापा सिन्धुपाल्चोक पुगेर पार्टी अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको लागि भोट मागेपछि स्थानीयवासीहरु आगो भएका छन् । थापाले राणाको लागि भोट माँग्नकै लागि सिन्धुपाल्चोकका गाउँगाउँमा डान्स गरेकी थिईन् । उनले राणाको पक्षमा माहोल बनाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा नाँचगान गरिएको थियो । तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाटै
२ मंसिर, भोजपुर । षडानन्द नगरपालिकामा राखिछाडिएको बम हटाउने क्रममा आज प्रहरीको अज्ञात समूहसँग भिडन्त भएको छ । षडानन्द नगरपालिका–१३ बोयाको भिरथाप्लो भन्ने ठाउँमा राखिएको टाइमबम हटाउने क्रममा आज अपराह्न प्रहरी र अज्ञात समूहबीच भिडन्त भएको हो । टाइमबम राखिएको हल्ला चलेपछि त्यसलाई हटाउन गएका प्रहरी र उक्त समूहबीच गोली हानाहान
अमेरिकी आविष्कारलाई चुनौती दिने गरिव देशका यी नेपाली डाक्टर
डाक्टरले काम गरिरहेको वेला हेरिरहंदा चमत्कार भए जस्तै लाग्छ, यो वाक्य पुलित्जर पुरष्कार विजेता न्यूयोर्क टाइम्सका चर्चित पत्रकार निकोलेस क्रिस्तोफले नेपालका प्रसिद्ध आंखा डाक्टर सन्दुक रुइतका वारेमा लेखेका हुन् । गत आइतवारको द न्यूओर्क टाइम्सम सन्डे रिभ्युमा निकोलसले पशुपति मन्दिर नजिक बाग्मती किनारमै रहेको तिलगंगा आंखा अस्पतालका निर्देशक डा सन्दुकलाई
एजेन्सी । एक पाँच कक्षामा पढ्दै गरेका मात्र १० वर्षीय बालकले आफ्नी शिक्षिकाको यातना सहन नसकेपछि विष खाएर आत्महत्या गरेका हुन् । विद्यालयबाट परीक्षा दिएर घर फर्किएपछि उनले यस्तो कदम उठाएका थिए । उनको मृत्यु भइसकेपछि बाबुआमाले उनी पढ्ने कोठाको टेबलमा एउटा सुसाइड नोट भेट्टाएका थिए । उक्त सुसाइड नोटमा यस्तो
कलंकीका होटलहरुमा पाइन्छन १२ बर्ष देखि १८ बर्ष सम्मका कलिला युवतीहरु !
काठमाडौं,१ मंसिर। कलंकीका केही होटेल र खाजाघरमा खुल्लमखुला यौनधन्दा हुने गरेको सरकारी अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी अधिकृत अनिता अधिकारी नेतृत्वको टोलीले २७ कात्तिकमा गरेको अनुगमनमा उक्त तथ्य खुलासा भएको हो । यौनकार्यमा लगाइएका अधिकांश १८ वर्षमुनिका किशोरी छन् । ११ सदस्यीय टोलीमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय
मोबाइल कहिल्यै ह्यांग (hang) नहुने यो टिप्स जान्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस् ! तरिका यस्तो छ
तपाइले कहिल्यै याद गर्नुभएको छ? मोबाइल फोन नयाँ-नयाँमा एकदम छिटो र राम्रो संग चल्छ । तर किनेको केहि महिनामै फोन ढिलो चल्ने, ढिलो स्टार्ट हुने, फोन नै ह्यांग हुने र कहिले काहिँ फोन आफै रीस्टार्ट समे हुने गर्दछ, यसले गर्दा मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुलाई रिस पनि उठ्छ, तर के गर्नु यति
Tagged how fixed mobile hang problem?
सलमान खानका नेपाली फ्यानहरुलार्इ खुशीको खबर : बलिउडका सुल्तान सलमान खान नेपाल अाउने
काठमाडौँ २ मंसीर । बलिउडका सुल्तान सलमान खान नेपाल अाउने भएका छन् । अाेडीसि इन्टरटेनमेन्टले फागुन २६ गते टुडिखेलमा आयोजना गर्न लागेको ‘दबंग : द सलमान खान लाइभ इन नेपाल’ का लागि काठमाडौँ आउन लागेका हुन । यस अघि चर्चित क्यानेडियन पप गायक ब्रायन एडम्सलाई अाेडीसिले नै काठमाडौँ ल्याएकाे थियाे ।
Tagged salman khan vist to nepal
चिनको भु-उप ग्रह नेपालमा खस्दै, चिनियाँ विज्ञले भने -‘यो स्थानमा ठोक्किदैछ’
कार्तिक ३०, बेइजिङ। चीनले सन २०११ मा प्रक्षेपण गरेको ‘स्पेश स्टेशन तियानगोंग–१’ सन २०१६ देखि नियन्त्रण बाहिर गएको डेलीमेल लगायतका अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन।एक बर्षदेखि नियन्त्रणबाहिर पुगेको ८.५ टनको ‘स्पेस स्टेशन तियानगोंग–१’ आगामी वर्षको जनवरीदेखि मार्च महिनासम्ममा पृथ्वीमा आएर ठोक्किने ‘युरोपियन स्पेस एजेन्सी’ (इसिए)का वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन। इसिएका वैज्ञानिकहरुले
Tagged China satellite
चिन ले दियो तिन करोड नेपालीलाई खुशी पार्ने यस्तो खबर
काठमाण्डु, २ मंसिर– ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ संसारभर फैलाउने उद्देश्यसाथ अघि बढेको छिमेकी देश चीनले नेपालसँग सडक र रेल दुवै मार्गबाट जोडिन चाहेको जनाएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उन्नाइसौं महाधिवेशनपछि राष्ट्रपति सी चिनपिङले प्रस्तुत गरेको अवधारणाबारे शुक्रबार राजधानीमा नेपाली सञ्चारकर्मीलाई ‘ब्रिफ’ गर्दै चिनियाँ राजदूत यु होङले नेपालसँग चीनले विकास गर्न चाहेको सम्बन्धबारे
Tagged Nepal Railway china nepal relation
काठमाडौं–प्रदेश र प्रतिनीधिसभाको चुनाव नजिकिदै गर्दा देशभर चुनावी प्रचारमाथि अवरोध र हमलाका घटना बढेका छन् । यस्तो अवरोध र हमलामा राज्यले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई जिम्मेवार ठानेको छ । तर, नेकपाले भने अहिलेसम्म घटनाको औपचारिक जिम्मेवार लिएको छैन् । बरु, सो पार्टीका नेताहरु यस्ता घटनालाई जनताको प्रतिरोध भनेर ब्याख्या
Tagged biplab maobadi